बितेका १६ दिन ..मेरो अनुभव « Kathmandu Television HD
बिगत १८-१९ दिन अघिदेखी मलाइ हल्का रुघाखोकी लागिरहेको थियो । त्यसलाई मौसम परिवर्तनको असर सम्झेर हल्का रुपमा लिदै आएको थिएँ । अकस्मात असोज ३ गते शनिवारको दिनमा मलाइ मेरो taste र smell पुर्ण रुपमा हराएको अनुभव भयो । त्यसपछि तत्काल मैले आफुलाइ आफ्नो परिवारसंग अलग (isolate ) गरिहाले । त्यसको २ दिनपछी ९९.५ सम्म ज्वरो पुग्यो । मंगलबार असोज ६ गते test गर्दा covid 19 positive यानि कि कोरोनाबाट संक्रमित भएको रिपोर्ट आयो। त्यसपछिका दिनहरु पुर्ण सावधानीका साथ बिताइयो । तातो तातो सुप , काढा र अरु स्वस्थकर खानपिनका साथ दिनहरु बिते । सबै परिवार घरभरी भएपनी आफू एक्लै १६ दिनसम्म नितान्त एक्लो भएर कोठामा बिताउनु पर्दा कतिसम्म पीडा हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव भयो । यो १६ दिनसम्म मेरो साथी भनेकै मेरो गितार , कम्प्युटर अनि टिभी बाहेक केही भएन । एक त कोरोना संक्रमित हुँदाको मानसिक तनाव अनि एक्लोपना …असाध्यै पिडादायी ।।। सधैं बिहान उठि आफ्नो नित्य कार्य सकिएपछी केहिबेर कसरत अनि योग मेरो रुटिन बन्यो । कसरत र योग अत्यन्तै जरुरी रहेछ यो बेला ।
असोज ७ गतेपछी मेरो ज्वरो पनि निको भयो र मलाइ पुर्ण रुपमा रुघाले छोड्यो । तैपनी isolation को मापदण्ड पुगाउन अझै १०-११ दिन बस्नु थियो एक्लै र बसियो । १६ दिनपछी हिजो मेरो टेस्टको रिपोर्ट negetive आयो , अर्थात मैले कोरोनालाइ जितेछु । त्यतिबेला बल्ल ढुक्क लाग्यो 😊😊।
म जस्तो अत्यन्तै सावधानी अपनाएर कुनै कतै समारोह र भेटघाटमा नगएर बसेको मान्छेलाई कसरी कोरोनाले छोयो भनेर म आफै अच्चमभित छु । सायद कुनै बेला पसल गएको बेला पो यो सरेको हो कि ?? अथवा कुनै बेला पसल गएर आउँदा मैले हाथ पो धुन बिर्से कि ?? जे पनि हुनसक्छ…
यो अवधिमा मैले कसैको पनि कलको र मेसेजको जवाफ दिन सकिन , त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु ।
यसैले कोरोनालाइ मजाकमा नलिऔं । यदि लागिहालेको खण्डमा सबैबाट अलगथलग भएर बिताउनु पर्ने १५-१६ दिन अत्यन्तै पिडादायी र मानसिक तनावले भरिएको हुन्छ । एकजनाले गरेर सम्पूर्ण परिवारमा पनि तनाव र पिडा हुन्छ । त्यसैले सचेत रहौ …सुरक्षित रहौ ।।
सबैको जय होस